လစာတိုးပေးပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ideas & Plans » လစာတိုးပေးပါ
Posted by pazflor on Jan 24, 2013 in Ideas & Plans | 20 comments
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၀န်ထမ်းတွေလစာဟာ အလွန်ဘဲ နည်းကြပါတယ်။ မိဘနှစ်ပါးလုံး အစိုးရ၀န်ထမ်းဖြစ်ခဲ့ကြလို့ ကျွန်တော်ငယ်စဉ်အခါက မိသားစုဟာ အလွန်ကျပ်တည်းခဲ့ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်တဲ့ အဖေ ပင်စင်ယူလိုက်တဲ့ အခါ မိသားစုမှာ ဘာမှ စုဆောင်းငွေဆိုတာမရှိပါဘူး။ ရသမျှ အဖေနဲ့ အမေ့ လခတွေဟာ စားစရိတ်၊ ကျောင်းစရိတ်နဲ့တင် အလျှင်မမှီခဲ့ပါ။
ကျွန်တော့် မိဘတွေဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ကို ကြည့်ပြီး အတော်ထိတ်လန့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါမို့ အစိုးရ၀န်ထမ်းလုပ်ချင်စိတ်ကို လုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဂွင်ကောင်းလို့ ရတဲ့လစာနဲ့ မတန်အောင် ချမ်းသာနေကြတဲ့ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေလည်း အများကြီးတွေ့ဖူးပါတယ်။ ငယ်စဉ်က အားကျစိတ်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ အတန်ငယ်အသက်ရလာတဲ့ အချိန်မှာ ရှက်ရမှန်းသိလို့ သူများမသာထှာရေစာစားမှ၊ ခိုးမှ လူစဉ်မှီနေနိုင်မဲ့ အစိုးရ၀န်ထမ်းဘ၀ကို လုံးဝသွားချင်စိတ်ကို ကုန်သွားပါတယ်။
ဆောင်ပုဒ်လေးတစ်ခုရှိတယ်လေ ဘာတဲ့ “၀န်ထမ်းကောင်းမှ တိုင်းပြည် ကောင်းမည် “ ဆိုတာ။ မြန်မာပြည်မှာ ၀န်ထမ်းကောင်းဆိုတာလည်း အတော်ရှားသားလို့ဆိုရမယ်။ အရင်ကတော့ မပြောတတ်ဘူး ကျွန်တော်တို့ ခေတ်မှာ ဆရာဝန်တွေကလွဲလို့ လူတော်ဆိုသူ တော်တော်များဟာ အစိုးရအလုပ်ဝင်မလုပ်ချင်ကြတော့ဘူး။ ဟုတ်လည်းဟုတ်တာဘဲလေ ပင်ကိုအရည်အချင်းရှိသူအများစုကတော့ သူများဆီကတောင်းမှ၊ညစ်မှ ရမဲ့ အလုပ်မျိုးကို ဘယ်လုပ်ချင်ကြမလည်းခင်ဗျ၊ ကိုယ်ဘာသာကိုယ် ရပ်တည်ကြမှာပေါ့။ ဘ၀ပေး အခြေအနေကြောင့်လည်း အစိုးရ၀န်ထမ်းဘ၀ထဲကို ၀င်လိုက်ရသူများလည်း ရှိမှာပါ။ အများစုကတော့ ထူးမခြားနား တွေများတယ်။
ဒါပေမဲ့ အစိုးရ၀န်ထမ်းဆိုတာလည်း တိုင်းပြည်အတွက်မရှိမဖြစ် မဟုတ်လား။ ဒီလူတွေ တော်မှ အမြော်အမြင်ရှိမှ လုပ်တတ်ကိုင်တတ်မှ တိုင်းပြည်က တိုးတက်မှာမဟုတ်လားခင်ဗျ။ ဒီတော့ အစိုးရဌာန ဆိုင်ရာတွေမှာ လူတော်တွေကို အလုပ် လုပ်ချင်လာအောင် စတင်ဆွဲဆောင်သင့်နေပါပြီ။ လူတော်တွေကို မွေးဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်။
အခြားအချက်တွေလည်း အများကြီးရှိသေးပေမဲ့၊ အခုအဓိကပြောချင်တာကတော့ လစာပါ။
အခု ခေတ်နဲ့ မလျှော်ညီတဲ့ ၀န်ထမ်းလစာနှူန်းထားနဲ့ ဘယ်လို လူတော်မျိူးက အစိုးရအလုပ်ကို လုပ်ချင်ကြမှာလည်းဗျ။ နိုင်ငံခြားမှာ သွားနေပြီး ချမ်းသာနေပြီးသား ၊နောက်ပညာလည်းသေချာတတ်၊ တိုင်းပြည်အတွက် အနစ်နာခံ အလုပ် လုပ်ချင်လို့ ဒီလစာနဲ့ လုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ လူမျိုးလည်းရှိမပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမလည်းဗျာ။
ဟာသလေးတစ်ခု ဖတ်ဖူးတယ်။ အမေရိကား သမ္မတ အိုဘားမားက “ငါတို့နိုင်ငံမှာ အခြေခံလစာက ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ကွ၊ စားစရိတ်နေစရိတ်အထွေထွေတွေနှူတ်လိုက်ရင် ၂၅၀၀ လောက်ကုန်တယ်ကွ၊ ဒါပေမဲ့ ကျန်တဲ့ ပိုက်ဆံ ဒေါ်လာ ၅၀၀ ကို သူတို့တွေ ဘယ်လို သုံးပစ်ကြတယ်ဆိုတာ တော့မသိဘူး” တဲ့။ မြန်မာသမ္မတကြီးက လည်းပြန်ပြောပါတယ်။ “ ငါတို့နိုင်ငံမှာ အခြေခံလစာက သုံးသောင်းကွ၊ ဒါပေမဲ့ လူတစ်ယောက် တကယ်ကုန်တာ တစ်လကို တစ်သိန်း၊ သူတို့တွေ အဲ့ လိုတဲ့ ပိုက်ဆံ ခုနှစ်သောင်းကို ဘယ်လိုရှာတယ်ဆိုတာကို ငါမသိဘူး” လို့ဆိုပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေ အကျင့်ပျက်တာ တခြားလော်မာတဲ့စိတ်ကြောင့်လည်းပါမယ်၊ ဒါပေမဲ့ အဓိက က ပေးတဲ့ လစာ မလောက်ဌ တာကနေစတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ ငတ်လို့ တဖြည်းဖြည်း ယူရင်း ချမ်းသာတဲ့ အထိကို လုပ်လာကြတာပါ။ အိန္ဒိယ ကမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကတော့ ပြောဖူးတယ်၊ သူတို့ဆီမှာ အစိုးရ၀န်ထမ်းအလုပ်က လစာအတော်ကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ နေထိုင်စရိတ်ကာမိတဲ့ အပြင် ချောင်ချောင်လည်လည် နေနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကတော့ လာဒ်စားတာဘဲတဲ့။
အခုတိုင်းပြည်ကြီးကမွဲနေတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေကလည်း အများကြီးဘဲ။ စီးပွားရေးကလည်း မကောင်း။ ဘယ်က ပိုက်ဆံနဲ့ လစာပေးမလည်းပေါ့။ ခေါင်းခဲစရာတော့ အမှန်ပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီအတိုင်းဘဲ ဆက်အောင်းထားမလား။
လစာက တိုးကို တိုးပေးရမှာပါ။ နိုမိုဆို ဒီအကျင့်ပျက်ချစားမှူ့ သံသရာကနေ ထွက်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ မထင်မိပါ။
management ပညာနဲ့ ပက်သက်ပြီးဘာမှ မတတ်ပေမဲ့ ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံအရ စနစ်တစ်ခုကို သဘောတွေ့မိပါတယ်။ ဒါက ကျွန်တော့် ကျောင်းပြီးတုန်းက ၀င်လုပ်ဖူးတဲ့ company တစ်ခုမှာ ကျင့်သုံးတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။ ကျွန်တော့် company ဟောင်းဟာ မြန်မာပြည်မှာ အတော်အတန်ပါဝါရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုပါ။ လုပ်ငန်းလည်း အတော်ကိုကြီးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ company ရဲ့  ပင်မ ၀န်ထမ်းအနေနဲ့ တော်ရုံလူကို မခန့်ပါဘူး။ ဒါမို့ company ရဲ့  တရားဝင် ၀န်ထမ်းဟာ လုပ်ငန်းပမာဏထက်စာရင် နည်းပါတယ်။ အောက်ခြေအလုပ်မှန်သမျှကို ကန်ထရိုက်ဘဲခေါ်သုံးပါတယ်။ ဒါမို့ ပင်မ၀န်ထမ်းတွေဆို ပင်စင်ပါ ပေးပါတယ်။ နှစ်စဉ် အခမဲ့ medical check up လုပ်ပေးတယ်။ အသက်အာမခံပေးတယ်။ မိန်းမနဲ့ ကလေးရှိရင် ကာကွယ်ဆေးလိုအပ်တာ အကုန်ထိုးပေးတယ်၊ ကားဝယ်၊ အိမ်ဝယ်ချင်ရင် လစာပေါ်မူတည်ပြီး အတိုးမဲ့ ထုတ်ချေးပေးတယ် စသဖြင့် တော်တော်ကို facility ကောင်းကောင်းပေးထားပါတယ်။ ရန်ကုန်ရုံးမှာဆို coffee lady တွေရှိတယ်၊ ကန်ထရိုက်နဲ့ ခန့်တာမျိုးပေါ့။ ၂၀၀၈ လောက်တုန်းက သူတို့တွေရဲ့ လစာတောင် တစ်သိန်းခွဲ ၀န်းကျင်မှာ ရှိတယ်။
အစိုးရအနေနဲ့လည်း ဒီလိုပုံစံမျိုးဆန်ဆန်လုပ်သင့် နေပြီထင်ပါတယ်။ ရုံးတွေမှာ ကြည့်လိုက်ရင် လူပိုတွေက အများကြီး။ ကွန်ပျူတာတွေအစားထိုး၊ စီမံခန့်ခွဲမှူ့ ပုံစံတွေ ပြောင်းလိုက်ရင် လူပိုတွေအများကြီးထွက်သွားပါမယ်။ ဒီကိစ္စက ချက်ချင်းကြီးတော့ ဖြုတ်ထုတ်သတ်ပုံစံမျိုးနဲ့ လည်းလုပ်လို့ မဖြစ်သေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ အနေနဲ့ တဖြည်းဖြည်းလူမွေးထားပြီး အစားထိုးသွားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အခု လူကြီးတန်းဖြစ်နေကြတဲ့လူတွေ ပင်စင်ယူတဲ့ အထိတော့ စောင့်ရ ဦးမလားတော့ မသိပါ။
(မဝေေ၀ ရဲ့  ပင်စင်ယူသင့် မယူသင့် ကိုဖတ်မိရာကနေ တွေးမိတွေးရာရေးမိပါသည်၊ အစိုးရ၀န်ထမ်းများကို စော်ကားမိသလို ဖြစ်သွားရင် တောင်းပန်ပါ၏)
View all posts by pazflor →
မြန်မာပြည်က.. big government ဖြစ်နေတယ်ပေါ့.။ small government လုပ်ပေါ့…။
အစိုးရက. ၀န်ထမ်းတွေအများကြိးခန့်.. အရာရာထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာဟာ.. ဆိုရှယ်လစ်/ကွန်မြူနစ်ဆန်ပြီး. ဘယ်စွန်းကိုရွေ့တာပါ..။
အစိုးရက.. အခြေခံဥပဒေနဲ့.. လုပ်ထုံးတချို့သာထားပြီး.. လူတွေလုပ်ချင်တာလုပ်.. ကိုယ့်သဘောကိုယ်ဆောင်နေကြစေသတည်းက.. ကွန်ဆာဗေးတစ်(ညာ)ဖက်ကိုယူတာပါ..။
မြန်မာပြည်က.. ဆိုရှယ်လစ်.. အာဏာရှင်စနစ်ကလာတာဆိုတေ့ာ.. အစိုးရက..နေရာတကာဝင်ပါနေပြီး.. မလိုအပ်တဲ့လူတွေနဲ့.. ကြီးလွန်းနေတာမှန်ပါတယ်..။
လူထုကလည်း..ထစ်ဆို.. အစိုးရချည်း.. ပြဿနာရှာလက်ညိုးထိုး..အပြစ်ပြောရင်း..အဲဒီထုံးစံ အသက်ဆက်သွင်းနေတယ်ပဲ..ပြောရမယ်ပေါ့…။
….အပြစ်ပြောတယ်ဆိုကတည်းက.. တာဝန်ယူခိုင်းနေတဲ့သဘော.. ကပ်ထည့်ပါသွားလိုက်တာကို.. လူထုသိပ်နားမလည်ဖြစ်နေပုံပေါ်ပါတယ်..။
တာဝန်ယူရမှတော့.. အစိုးရပေါ့နော… Big Government ဖြစ်တယ်ပေါ့…
ဆိုရှယ်လစ်ဥာဉ်ဆိုးတွေ.. ခွာကျ/ခွာချ နိုင်ကြစေသတည်း..
ငွေရှင်များကို.. အပြစ်မြင်… ရန်လိုတဲ့..ပစ္စည်းမဲ့ဒေါသတွေ.. ငြိမ်းကြကုန်စေသတည်း…။ :harr:
သူကြီးတို့လို့ ပညာရှင်စကားနဲ့ တော့ မပြောတတ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေ က ဖောင်းပွနေတာ အမှန်ဘဲ။ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို ခွဲဝေချပေးရမှာတော့ သေချာပါတယ်။
တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေကလည်း ကိုယ်နယ်မြေနဲ့ သင့်တော်မဲ့ ပေါ်လစီချ၊ ၀န်ထမ်းခန့် တာမျိုးလုပ်ရမယ်ထင်ပါတယ်။
အခုတစ်လော ဘာ လုပ်သင့်ပါတယ် ( What ) ဆိုပြီး ၊
အကြံပေးကြတာတွေ တော်တော် တွေ့နေရတယ် ။
ဖြစ်သင့်တာတွေ ဆိုတော့လည်း ၊
အများက ဝိုင်း လက်ခုပ်တီး ထောက်ခံကြပေါ့ ။
( ဥပမာ – ငြိမ်းချမ်းရေး ကို တောင်းဆိုပါတယ် )
ခက်တာက ၊ လူမုန်းများမယ့် ၊
ဘယ်လို လုပ်သင့်ပါတယ် ( How ) ဆိုတဲ့ အပိုင်း မပါကြဘူး ။
( ဥပမာ – ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုသာ တောင်းဆိုတာ Federal ကျတော့မပေးချင်ဘူး ၊
တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သယံဇာတကျတော့ ဆက် လက်ဝါးကြီးအုပ်ချင်သေးတယ် )
ဝန်ထမ်း လစာတိုး ချင်ရင် ၊ အစိုးရ ဝန်ထမ်း တစ်ဝက်လောက်ကို အလုပ်ထုတ်ပါ ။
ပင်စင်ယူရမယ့် အသက် ကိုလည်း ၇၀ သတ်မှတ်လိုက်ပါ ။
ပင်စင် ပေးဖို့ ကျပြန်တော့လည်း ၊ ငမွဲ တိုင်းပြည် မို့လို့ ၊ အစိုးရမှာ ပိုက်ဆံ မရှိပါဘူး ။
အဲဒီတော့ကာ ၊ ပထမဦးဆုံး ၊ ထွက်ချင်တဲ့သူတွေကို ထွက်ခွင့်ပေးလိုက် ၊
ကျန်တဲ့သူတွေကိုလဲ ၊ အလုပ်ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ခိုင်းလိုက် ။
အလုပ်ပင်ပန်းတဲ့ဒါဏ် ၊ မခံနိုင်တဲ့သူတွေ ထပ်ထွက်လိမ့်မယ် ။
အဲဒီ နေရာတွေကို လူစားထိုး ထပ်မခန့်နှင့် ၊ ရှိတဲ့သူနှင့် ရအောင်လုပ် ။
မလုပ်နိုင်ရင် ၊ ထွက် ။ ဒီနည်းနှင့်ပဲ ၊ တဖြေးဖြေး ဝန်ထမ်း အင်အားကို လျော့ချရမှာပဲ ။
ပြည်သူလူထုကို အခွန်တွေ ဒါဏ်ငွေတွေ ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် တိုးကောက်ပါ ။
( အထူးသဖြင့် ယာဉ်စည်းကမ်း ဖေါက်ဖျက်တဲ့ သူတွေကို လှည့်ပါတ် ရှာဖွေဖမ်းပြီး ၊
ဒါဏ်ငွေတွေ ဗုံဗေါလအော ချပေးလိုက်ပါ )
ဟုတ်တယ်ဗျို. အဘဖောပြောတာ ထောက်ခံတယ်….အဲလိုလုပ်ပလိုက်ရမှာ…
” ပြည်သူလူထုကို အခွန်တွေ ဒါဏ်ငွေတွေ ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် တိုးကောက်ပါ ။ ”
အဲဒါတစ်ကယ်အရေးထားဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ကိစ္စပါပဲ။ လုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံး နဲ့ ပြည်သူတွေဆီက အခွန်တွေကို သေချာစိစစ်ပြီး မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ အပြည်အ၀ရအောင် ဆောင်ရွက် ကောက်ခံသင့်နေပါပြီ။ အများစုက(အားလုံးနီးပါ) ကုမ္ပဏီအဖြစ်ရပ်တည်နေပြီး အခုထိ အခွန်မဆောင်တာတွေ ဆောင်ပြန်တော့လည်း အပြည့်အ၀မဟုတ်။ အဲဒီတော့ ၀န်ထမ်းတွေအနေနဲ့ အခွန်ဆောင်ချင်သော်လည်း ဆောင်ခွင့်မရ ဆောင်လို့မရဖြစ်နေတဲ့သူတွေ အများကြီးပဲ။ တရားမ၀င်တဲ့လုပ်ငန်းပုံစံဖြစ်နေတယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် နိုင်ငံခြားကလာပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ကုမ္ပဏီကို ပြည်တွင်းလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့လုပ်တာတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ အဲဒီလိုတွေလုပ်နေသမျှတော့ လူနည်းစုပဲ ကြီးပွားနေပြီး တိုင်းပြည်အတွက် နစ်နာမှု နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှု လာဒ်ပေး လာဒ်ယူမှုတွေနဲ့ပဲ စခန်းသွားနေဦးမှာပါပဲ။
စီမံကိန်းကလည်း BOT နဲ့ရထား.. ပြီး
စီမံကိန်းနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး သုံးမှာဆိုပြီး MIC ခွင့်ပြုမိန့်နဲ့ အခွန်လွတ်သွင်း…
တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာတွေ ဆောက်မယ်ဆိုပြီး ပစ္စည်းတွေ အခွန်လွတ်သွင်း၊ သစ်တွေဝယ်ခွင့်ရ ပြီးတော့ ဈေးကွက်ထဲမှာ ပြန်ထု။
အစိုးရအလုပ်မှာ မနက် ၁၀ နာရီမှာ ရုံးရောက် ၁၂ လောက်ဆို ထမင်းစား ၂ခွဲ ၃ လောက်ဆို လဘက်ရည်ဆင်းသောက် ၄ နာရီလောက်ဆို ရုံးဆင်းသူတွေ က အများကြီး ခင်ဗျ။
အရင်အလုပ်တုန်းက ဆို site ထဲ ဖြစ်တဲ့ အတွက် တစ်နေ့ ၁၂ နာရီ၊ ဒီထဲမှာ ထမင်းစားချိန်နဲ့ နားချိန်က ၂ နာရီဆိုတော့ အလုပ်ချိန် ၁၀ နာရီလုပ်ရပါတယ်။ လူကြီး အများစုက ညပိုင်းထမင်းစားပြီးတောင် အလုပ်လေးတွေ လက်စသပ်ဖို့ ဆက်လုပ်ရပါတယ်၊ နောက် အများနဲ့ ယှဉ်ရင် ပြောနိုင်ဆိုနိုင်အောင် သေချာအောင်ညပိုင်းမှာတောင်ကိုယ်သဘောနဲ့ ကိုယ် အလုပ်ဆက်လုပ်ကြရပါတယ်
အဘပြောသလိုဘဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျပ်ပေးပြီး ခိုင်းမှရမယ်ထင်ပါတယ်။
ပိုစ့်နဲ့ ကွန်မန့်တွေဖတ်ရတာ အားရစရာဘဲဗျာ။
ဒါပေမယ့် အဲလိုလုပ်ဖို့အတွက် အစိုးရနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေမှာ လက်တွေ့ဆန်တဲ့ လုပ်ရဲနိုင်စွမ်းရှိဖို့လိုတယ်။
အပြောနဲ့ဘဲ ညွှန်ကြားနေရင်တော့ဖြင့် ဒါလည်းအတွေးပါဘဲထဲ ရောက်သွားမှ စိုးမိတယ်လေ။
အပေါ်ကလူတွေကလည်းစား၊ အောက်ကလည်း စားသူတွေစား၊ ရေသာခိုသူတွေခို ဆိုတော့ အပြစ်လွတ်တဲ့ လူက ခပ်နည်းနည်း ဘဲလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါမို့ လက်တွေ့ဆန် လုပ်ရဲဖို့လည်း သိပ်တော့ မမြင်မိပါသေးဘူး။
လုပ်ခလစာ လောက်ငှတဲ့သူဆိုတာ ခပ်ရှားရှားပါ။ ကျွန်မတို့ လို နယ်ကနေတက်လာ ရန်ကုန်မှာ အလုပ်လုပ်သူအဖို့ပိုငွေဆိုတာ ဘယ်ချောင်ကပ်နေတယ် မသိ။ ကိုယ်ပိုင်အိမ်၊ ကားဆိုတာ အိပ်မက်တစ်ခုမျှသာ။ ရင်မောတယ် မြန်မာပြည်…။
ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ။ တစ်နေ့နေ့တော့ ဖြစ်ကောင်းပါရဲ့။ ကိုယ်ဘက်ကလည်း အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားနေရမှာပေါ့ခင်ဗျာ။
အမှန်တွေကို ရေးထားတာမို့လို့ အစိုးရ၀န်ထမ်းလုပ်နေပေမယ့် စိတ်မဆိုးပါဘူး။
ကျွန်မဆိုရင် ၀န်ထမ်းလောကထဲမှာ နေနေတာမို့လို့ နားလည်ပါတယ်။
ကျွန်မက စက်ရုံကြီးတစ်ခုမှာ လုပ်ချင်လွန်းလို့ကို (တခြားအပြင်ဝင်ငွေလဲရှိလို့) လုပ်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးတွေအတွက် အခက်ဆုံးပြသနာက အလုပ်ဖြုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ကြီးပဲ အလုပ်မလုပ်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်ဓါတ်မကောင်းတဲ့သူဖြစ်ဖြစ် အလုပ်ဖြုတ်လေ့မရှိဘူး။ ပြစ်မှုတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်လာမှသာ အလုပ်ဖြုတ်လို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အလုပ်ခန့်လို့တော့ရပါတယ်။ ဆွေမျိုးတော်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုတော်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ဌာနတစ်ခုမှာကြည့်လိုက်ရင် တစ်ဝက်လောက်က လူပိုလူလျှံတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။ အဲဒီတစ်ဝက်ကို ဖြုတ်ပြီး တကယ်လုပ်နေတဲ့တစ်ဝက်ကို လစာ ၂ ဆ ပေးလိုက်ရင် အရမ်းကောင်းမှာ …
အဲဒီလိုတော့ ဘယ်လူကြီးကမှ အမုန်းခံလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး …
လူတွေက ပြောကြတယ် အစိုးရအလုပ်က ငြိမ်တယ်၊ တည်မြဲတယ်တဲ့။ တော်ရုံ အလုပ်မဖြုတ်မှန်းသိတော့ မလုပ်မရှူပ်မပြုတ်တွေ ပိုများလာတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
သိပ်မှန်တဲ့ အိုက်ဒီယာပါပဲ ကို pazflor
ကျုပ်မလဲ အခွန်ရုံးက ချီးထုပ်တွေနဲ့ သွားသွားတွေ့ နေရတဲ့
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကိစ္စကြီးကနေ လွတ်မြောက်ချင်လှပါပီလေ
မကောင်းမှန်းသိပေမဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အစိုးရ၀န်ထမ်းတော်တော်များကို ချီးထုပ်လို့နာမည်ပေးမိတယ်ဗျ။ :hee:
အစိုးရရုံးသွားဖို့ ကို တော်တော်ဘဲကြောက်မိတယ်၊ မလွဲမရှောင်သာမှဘဲ။
မုန့်လုံးစက္ကူကတ် လခကမလောက်တော့ ၀န်ထမ်းက ပြည်သူဆီကတောင်း ပြည်သူက ၀န်ထမ်းကိုမုန်း ပေးစရာ ကျပ်တည်းတော့ ပစ္စည်းမဲ့ဒေါသတွေဖြစ် … တဂဲ့ တရားခံကပျောက်နေတယ်…
၀န်ထမ်းတွေကို စာနာပါတယ်။ လမ်းဆုံတွေမှာ ယူနီဖောင်းအဖြူတွေဝတ်ပြီး ကားတွေဆီက ဘော်ဒါကြေးဆိုပြီး လက်ဖြန့်တောင်း.. တချို့စပယ်ယာတွေက ကားပေါ်က နှစ်ရာတန်လေးတွေခေါက်ပြီး ပစ်ချခဲ့ရင် အလုအယက်ကောက်… ဘုရားရေ.. ငါတို့လူမျိူးတွေ ဘယ်တော့များမှာ ဂုဏ်သိက္ခာ၇ှိရှိရှင်သန်နိုင်မဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကို ရကြမှာလဲ…
ပြောရရင် ဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့သူတွေ လာဘ်စားတာ မလောက်လို့ ငတ်လို့ ရယ် မဟုတ်ဘူးဗျ
အကောင်ကြီးလေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကြီးလေ ခိုးထုပ် ခိုးထည် ပိုကြီးလေ ဆိုတာပဲ
ဝန်ထမ်းတွေမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ခွဲပေးထားဖို့လိုတယ်
ခု နာမည်ကြီး စူပါမားကပ်ကြီးတွေ ဝင်စစ်ကြည့် မှောင်ခိုပစ္စည်းတစ်ခု ဒဏ်တစ်ခါရိုက်ရမယ်ဆို တပြည်လုံးကဝန်ထမ်းတွေ တစ်လစာငွေ ပေးလို့ရလောက်အောင် ရနိုင်သေးတယ်
၀န်ထမ်းတွေလစာနည်းတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြမှာပါ အစိုးရ၀န်ထမ်း တင်မဟုတ်ပဲ တစ်ခြားနေရာတော်တော်များများတွေမှာလည်း ရှိပါတယ် အဲဒီလိုဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ၀န်ထမ်းတွေ စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေခြင်း၊ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်း ရပ်တည်ဖို့တောင်မလွယ်လှပါ။ဒါပေတီး ၀န်ထမ်းများမှ တာဝန်ကျေမှုဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ တာဝန်ကျေရဲ့နဲ့ ယခင်တိုင်းလစာနဲ မလုံလောက်ဖြစ်နေပါက အဲဒီဝန်ထမ်းတွင် ပျက်စီးဖို့နီးလာပါပီ လာဘ်ပေးလက်ယူမှုဖြစ်လာဖို့နီးလာပါပြီ … ဒီတော့က ဘယ်လိုမျိုးတွေ ဆက်လုပ်မလဲ.. နိုင်ငံမှာ ဘာတွေပေါများနေမှာလည်း… ပပျေက်ရေးဖြစ်အောင် ဆိုပြီး အော်မနေနဲ့ ခင်ဗျတို့တွေဘက်ကလည်း ၀န်ထမ်းတွေပေါ် ပြန်ကြည့်ပါဦးလို့ အစိုးရ၀န်ထမ်း သို့မဟုတ် အခြားအခြားများတွက် စဉ်းစဉ်းစားစားလုပ်စေချင်ပါသည်။ တစ်ခါလာလည်း အစည်းအဝေး တစ်ခါလာလည်း အစည်းအဝေး . တစ်ခါလာလည်း လွှတ်တော် အဲဒီထဲမှာတင် အော်မနေကြပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ် ပြည်သူတွေ ကိုယ်စားလွှတ်ထားတာနော်….